काँग्रेस महाअधिवेशन वहशः कति संभव छ देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवारको खोजी ? - सुनाखरी न्युज
काँग्रेस महाअधिवेशन वहशः कति संभव छ देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवारको खोजी ?
Posted on: July 10, 2021 - 6:55 am
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । काँग्रेस संस्थापन इत्तर पक्षबाट सभापतिमा आकांक्षा देखाएका नेताहरुबीच साझा उम्मेदवार छनोटका विषयमा शुक्रबार अपरान्ह बत्तीसपुतलीस्थिति अनुपम फुडल्याडमा सामुहिक छलफल भयो ।
सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरेका ८ जनाबीच भएको छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र बलबहादुर केसी सहभागी थिए ।
बलबहादुर बाहेक सबैजनाले सभापतिमा दाबी गरेका छन् । बैठकको संयोजन गरेका नेता केसीले संस्थापन इतरबाट एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार उठाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यसमा सकारात्मक छलफल सुरु भएको केसीको भनाइ छ ।
शुक्रबारको छलफलले एकताको सम्भावना बढाएको केसीको दाबी छ । नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । यस्तै नेता शेखर कोइरालाले पनि एउटै उम्मेदवारीका विषयमा बैठक सकरात्मक रहेको बताए । एउटै उम्मेदवार दिनेमा दुविधा नरहेको शेखरको भनाइ थियो । यद्यपि कसैले कसलाई छोड्ने कुरा भने नगरेको उनले बताए ।
यस्तै नेता सिंहले पनि साझा उम्मेदवार दिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको तर एउटालाई अरूले छोड्ने कुरा भने नभएको बताए । संस्थापन इत्तर पक्ष आगामी महाधिवेशनमा मिलेर जानुपर्ने केसीको जोड छ । हिजोको छलफलको सुरुमै केसीले देउवाइत्तर गठबन्धन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, आकांक्षी सबैले आ–आफ्नो राम्रो माहोल रहेको दलिल पेस गर्दै सभापति उठ्ने अडान राखेका थिए । तर, छलफल सहभागी सभापतिका ८ जना आकांक्षीले कसैले कसैलाई स्वीकार नगरेको अवस्था छ ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफू छलफलमा सहभागी भए पनि फरक रुपमा कसरत गरिरहेको बताए ।